Miara-manamboatra mofo miaraka amin'ny ankizy sy miaina sakafo
Ny karazana voa dia mamaritra ny tsiro
Mofomamy mofo - izany no fiasa!
Ny akora ilaina indrindra amin'ny mofo mahomby dia ny fotoana, satria izany no ilain'ny koba mba hahafahany misondrotra ampy ary hahatratrarana vokatra azo avy amin'ny fanaovan-mofo.
Ny antony mahatonga ny karazan-tsiro isan-karazany amin'ny mofo dia ny karazana voamaina ampiasaina sy ny fitambaran'izy ireo.
varimbazaha dia voamadinika miloko maivana misy tsiro malefaka be izay miteraka koba malefaka sy lasitike noho ny gluten (proteinina adhesive) ao anatiny. Matetika izy io dia afangaro amin'ireo lafarinina tsy misy gluten avy amin'ny oats sy katsaka mba hanatsarana ny kalitaon'ny fanaovany mofo.
Malaza indrindra rehefa manendy mofo ampembysatria mamatotra tsara ny hamandoana izy ary maharitra ela kokoa ny mofo. Ny fatiantoka dia ny fampihenan'ireo akora ao ny loosening ny koba ary azo ampiasaina amin'ny fikarakarana azy amin'ny masirasira ihany.
Toy izany koa no izy orza, izy io ihany koa dia azo ampiasaina miaraka amin'ny masirasira amin'ny fanaendrehana mofo, fa tena manan-karena mineraly sy vitamina B.
Misy koa mineraly maro ary koa vy milletNy voa manontolo dia matetika ampiasaina amin'ny fanaovan-tsakafo.
teny Matetika ampiasaina ho solon'ny lafarinina varimbazaha, satria mitovy be aminy. Saingy satria ny proteinina mametaka azy io dia mora tohina kokoa, io koba-mofo io dia tokony hosasana tsara fotsiny.
Voamaina sy zava-manitra hanendasanao mofo
Mba hahatratrarana isan-karazany ny tsiro, dia azo ampiana ao anaty mofo ny voam-bary toy ny voana tanamasoandro, voa sesame na voa voatavo. Ny Hemp dia manao crispier mofo sy flaxseed dia manome azy asidra matavy omega-3 maro.
Ho fanampin'ny sira misy zava-manitra, ny masomboly caraway, fennel, aniseed na coriander dia azo ampiana amin'ny koba ihany koa mba ho mora levona ny mofo misy masirasira.
Voalohany indrindra, ny akora rehetra dia tsy maintsy refesina tsara, tsy tokony ho mangatsiaka loatra izy ireo ary tokony hafana amin'ny efitrano. Soso-kevitra ny hanasiana ny lafarinina mba hisorohana ny fananganana vongan.
Raha vao nafangaro ireo akora rehetra dia tsy maintsy kosehina tsara ny koba satria io ihany no fomba famatsiana oksizenina azy. Arakaraky ny faharetan'ny koba miasa toy izao, ny looseran'ny mofo vita.
Alohan'ny hametrahana ny koba ao anaty lafaoro dia tsy maintsy miakatra vetivety izy io. Mba hanaovana izany dia tokony hosaronan'ny toerana misy mari-pana amin'ny efitrano ahazoana aina izy io, poizina ny drafitra. Ny koba dia vonona amin'ny fanodinana bebe kokoa rehefa nitombo hatramin'ny roa heny ny habeny ary nisy lavaka notsindriana rantsan-tànana nanidy azy irery.
Avy eo atosika ao anaty lafaoro efa nafanaina aloha ary endasina. Raha ampiana rano mafana ny lovia iray eo am-piandohana, dia mijanona elastika ny velaran'ny mofo ary tsy rovitra rehefa mihabetsaka ny mofo. Ho fanampin'izay, manjary volontany sy mamirapiratra ny crust.
Azonao atao ny mamantatra mora raha vonona ny mofo amin'ny alàlan'ny fikikisana ny bokin'ny mofo ao ambanin'ny mofo. Raha toa poakaty ilay izy, dia vita ny fanaovan-tsakafo.
Raha mbola hitanao fa miasa mafy na be pitsiny loatra ny mofo fanaovana mofo dia azonao atao ihany koa ny mampiasa mpanao mofo. Eto dia tsy maintsy apetraka ao anaty fitaovana fotsiny ireo fangaro ary rehefa afaka adiny telo eo dia eo ambony latabatra ny mofo vaovao.
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 16. Jolay 2021 16. Jolay 2021 Sokajy mihinana sy misotroKeywords manendasa miaraka amin'ny ankizy, mofo, fanaova mofo, manendasa miaraka
Ny eritreritra iray momba ny "fandrahoana mofo"
Britta hoy izy:
16 Jolay 2021 amin'ny 14:40 alina
Hevitra tsara izany, na inona na inona toetr'andro, ary mianatra ny fomba fanaovana sakafo ny ankizy.
indray Lahatsoratra taloha: Ny famongorana ny kankana tamin'ny taonjato faha-21
more Lahatsoratra manaraka: Jamba lamba - TSY MISY hotafiko aho!